आफ्नै श्रीमतिलाई उनकै प्रेमीसंग बिहे गराईदिने अचम्मका श्रीमान ! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > आफ्नै श्रीमतिलाई उनकै प्रेमीसंग बिहे गराईदिने अचम्मका श्रीमान ! (भिडियो हेर्नुस्)
admin October 7, 2020 October 7, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाडौ । दाङ्ग जिल्लाको घोराही उपमहानगर पालिकामा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एक जना पुरुषले आफ्नै श्रीमती उनको प्रेमीसंग विवाह गराइदिएका छन् । आफु श्रीमतीवाट पीडित भएको, आफु हुँदाहुँदै पनि श्रीमती अरु पुरुषसंग सम्बन्ध राखेको थाहा पाएपछि विवाह गराइदिएको दावी गरेका छन् । श्रीमतीकै कारण लागेको ११ लाख रुपैया ऋण पनि तिर्ने सर्तमा उनले विवाह गराइदिएका थिए । सम्बन्धित समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
तर अहिले ति महिलाले म त्यो ११ लाख रुपैया पनि तिर्दिन, मेरो अर्का पुरुषसंग सम्बन्ध पनि थिएन । अनाहकमा आरोप लगाएर विवाह गराइदिए भन्दै आरोप लगाएकी छन् । घोराहीका खड्कवहादुरले आफु समस्यामा परे भन्दै अहिले फेरी मिडिया गुहारेका छन् । उनी कामका लागि भारत गएका थिए । आफु भारतमा भएको बेलामा श्रीमती अरुसंग नजिकिएकी छन् भन्ने आफुले थाहा पाएपनि केही नबोलेको बताएका उनले आफु घरमा आएपछि पनि श्रीमतीले उस्तै ब्यवहार गर्न नछोडेपछि विवाह गरिदिएको बताएका छन् । आफु नेपाल फर्किसकेपछि पनि उनी आफ्नो प्रेमीसंगै गएर बसेको आफुले थाहा पाएको बताएका छन् ।